इरान–अमेरिकाबीचको त नावले तेस्रो विश्वयु द्ध हुने सम्भावना कति छ ? – सजल सन्देश
By Sajal sandesh	 On२४ पुष २०७६, बिहीबार १२:०२
काठमाडौं – अमेरिकाले इरानका वरिष्ठ सैन्य नेता कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि विश्वभर तरंग सृजना गरेको छ । इराक पुगेका बेला गत शुक्रबार सुलेमानीको ड्रोन आक्रमणबाट अमेरिकाले हत्या गरेको थियो । यसको जवाफ स्वरुप बुधबार बिहानै इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा मिसाइल आक्रमण ग¥यो । यी दुई देशबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले अब तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन लागेको हो भन्ने चर्चा विश्वभर भइरहेको छ ।
यसबारे बीबीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक संवाददाता जोनाथन मार्कसले उक्त कारबाही र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे पाठकहरूका विभिन्न प्रश्नको उत्तर दिएका छन्। लूइस ओल्कटले तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना कति छ ? भनेर बीबीसी संवाददाता मार्कसलाई सोधेका छन् ।
ओल्कटको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्दै बीबीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक संवाददाता जोनाथन मार्कसको जवाफ उनकै शब्दमा :
केहीले सुलेमानीको हत्यालाई अमेरिकाले इरानविरुद्ध “युद्ध घोषणा“ गरेको अर्थमा व्याख्या गरेका भए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई कम आकलन वा बढाइचढाइ गर्नु हुँदैन।यसले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउँदैन। त्यस्तो द्वन्द्व हुनका लागि महत्त्वपूर्ण पात्र ठानिने रुस र चीनजस्ता देशको यो घटनाक्रममा ठूलो भूमिका छैन ।
तर यो मध्यपूर्व र त्यहाँ अमेरिकाको भूमिकाबारे निर्णायक क्षण बन्न सक्छ। इरानले ठूलो प्रतिकार गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि त्यसले क्रिया र प्रतिक्रियाको चक्र सुरु गराइदिन सक्छ जसबाट दुई देशबीच सबैतिर द्वन्द्व चर्किन सक्छ। इरानको प्रतिक्रिया उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य स्वार्थकाविरुद्ध हुन सक्छ। तर त्यसबाहेक इरानले आफूले कमजोर ठानेको र अमेरिकासँग सम्बन्ध भएको जुनसुकै स्थानलाई पनि निसाना बनाउन सक्छ।
यस्तै एमन डानहीले ‘के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कसैलाई त्यसरी मार्न अनुमति दिन्छ? भन्ने प्रश्नमा मार्कस भन्छन् :
सुलेमानी इराकस्थित अमेरिकी सैनिकहरूमाथि भएका घातक आक्रमणका लागि जिम्मेवार रहेको अमेरिकाको तर्क छ। ती सैनिकहरू त्यहाँ वर्तमान इराकी सरकारको अनुरोधमा गएका थिए। सुलेमानीले धेरै अमेरिकी सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको भन्ने अमेरिकाको मान्यता छ। उनले नेतृत्व गरेको ’कूड्स फोर्स’ लाई अमेरिकाले आतङ्ककारी सङ्गठन मान्छ। त्यसैले अमेरिकाले त्यसलाई वैधानिक परिभाषा दिन सक्छ।
तर यसको कानुनी पक्षबारे अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनका ख्यातिप्राप्त विद्वान् तथा नोट्र डाम ल स्कूलकी प्राध्यापक म्यारी एलन ओकनलको धारणा यस्तो छ, ‘जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै आत्मरक्षाको उपायस्वरूप भनि गरिएको हत्या कदापि वैधानिक हुन सक्दैन। यहाँ सम्बन्धित हुने कानुन भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र हो। त्यसले आत्मरक्षालाई परिभाषित गर्दै वास्तविक र उल्लेख्य सशस्त्र आक्रमण हुँदा मात्र प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार भनेको छ।“
“यो घटनामा अमेरिकाले गैरकानुनी हत्या मात्र हैन, इराकभित्र अवैधानिक आक्रमण पनि गरेको छ।“
मिडिया विधेयक आएमा गगन थापा मात्रै होइन, भीम रावलदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्म थुनिन्छन